Betgba Egwuregwu na Ahịa Ahịa - Ihe Anyị Ma Banyere Abụọ - jluis37.com
Nye ọtụtụ ndị, mmekọrịta dị n’etiti ịkụ nzọ na egwuregwu na itinye ego na ebuka abụghị ihe doro anya. Nke mere na otu onye agaghị aghasasị echiche banyere nke ọzọ. Mana mgbe ị na-eche maka ya n’ezie, enwere ọtụtụ myirịta dị n’etiti abụọ ahụ, na n’ihe ọ bụla, nnukwu ihe enwere ike ịmụ site na otu, ma tinye ya na nke ọzọ.
Maka mmalite, ha abụọ dabere ma ọ dịkarịa ala ruo n’ókè ụfọdụ na ịkọ ọdịnihu, ma ọ bụ ihe ga-esi n’ọdịnihu, ma ọ bụrụ na ịchọrọ. Ọ bụghịkwa ihe ijuanya na ndị na-agba mgbọ egwuregwu na ndị na-etinye aka n’ọtọsị nwere ike ịdaba n’ọnyà nke mkpebi eji obi mee kama isi.
Ndị a bụ ihe mmụta mụtara ma daba na ụzọ abụọ a.
‘Egwu’ abụghị mgbe niile
Ọ bụrụ na oge ndị a akụziworo ụmụ mmadụ ihe ọ bụla, mgbe ahụ ọ ga-atụ anya ihe a na-atụghị anya ya. Ihe ọ bụla nwere ike ime. Ya mere, iche ihe ọ bụla nzọ ma ọ bụ ngwaahịa 100% ida-mma, bụ mmeghe. Ihe banyere ihe egwu, bụ na ihe egwu na ọghọm adịkarịghị aka na aka.
Otu ihe atụ kachasị mma bụ ịkụ nzọ megide ìgwè mmadụ mgbe ị na-egwu egwuregwu. Were nzọ na Mixed Martial Arts (MMA). Ebe ọ bụ na ịkụ nzọ na MMA bụ ihe ọhụrụ, akwụkwọ anaghị enwetacha ya. Nke na-apụtaghị na ìgwè mmadụ ahụ agaghị eso nsogbu ‘dị ka’ n’ụzọ ọ bụla. Nke a nwere ike ịmepụta “ihe egwu achọpụtara”, yabụ, ihe ọghọm a hụrụ dị ka nke dị elu ma ọ bụ dị ala site n ’ụzọ ụfọdụ. N’okwu dị ka nke a, ịkụ nzọ megide ìgwè mmadụ nwere ike iyi azụmahịa dị oke egwu na onye na-enweghị uche mana ọ nwere ike ọ gaghị adaba na “ezigbo ihe egwu”.
Echiche Na-eme Nwoke ahụ
Psychologicalgba aghara na akparamàgwà mmadụ, na ịkụ nzọ na egwuregwu yana ịkụ nzọ na ebuka, nwere ike ime ka nwoke (ma ọ bụ nwanyị!) Na-eche ‘onwe ya’ nke ọma na ikpe ikpe ihe na ego karịa ihe ọ bụ n’ezie. Ma ọ nweghị ihe dị irè dị ka ịgbaso ‘hunch nkeonwe’ na ịtọfu ụlọ akụ ochie. Hunches na-agbanwe agbanwe – chọọ eziokwu kama.
Isi Obi Vs
N’eziokwu, chekwaa ihe abụọ dị iche, iji obi mmadụ na-ekpebi ihe ọ ga-eme kama isi n’isi bụ nzuzu nke pụtara ìhè n’etiti ndị na-agba mgbọ egwuregwu karịa ndị na-abanye ebuka. Onye ọ bụla nke gara mgbe ihe omume egwuregwu otu egwuregwu na-ebi ndụ ekwesịghị inwe nnukwu nsogbu iche n’echiche ihe kpatara nke a. Ihe zuru oke okike ya chọrọ ịbanye na Astros na-emeri MLB World Series, mana naanị ịchọrọ ka ọ bụrụ eziokwu, n’agbanyeghị agbanyeghị, ọ pụtaghị na ndị Yankees agaghị emeri kama.
Ihe Ọmụma Bụ Ike
Ọ bụ n’ezie. Ma ọ bụ eziokwu na-emetụtakwa ịkụ nzọ na egwuregwu na ịkụ nzọ na ebuka. Ọ dịghị mma naanị ‘iji mmetụta’ na-aga ‘ma ọ bụ ime ihe ndị ọzọ na-eme na-eme. Iji ‘merie’ na nke ọ bụla, ọ dị mkpa ịbanye nke ọma. Ọzọkwa, chefuo ihe mere na ngwụcha izu gara aga maọbụ afọ gara aga. Muta otu esi egwu ogologo egwuregwu. Ogologo egwuregwu na-akwụ ụgwọ.